ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါသိုးကလေး - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > နေ့-by-နေ့ > ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါပွဲခရစျတျော
“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ပသခါသိုးသငယ်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် ခရစ်တော်ကိုသတ်ခြင်းဖြစ်သည်” (1. ကော။ 5,7).
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း 4000 နီးပါးက ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးအား ကျွန်အဖြစ်မှ ကယ်နှုတ်ခဲ့သော အီဂျစ်ပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကြီးကျယ်သော အဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြတ်ကျော်မသွားချင်ပေ။ ဘေးဒဏ်ဆယ်ပါး 2. မောရှေအား ဖာရောဘုရင်အား သူ၏ခေါင်းမာမှု၊ မာနထောင်လွှားမှုနှင့် မာနထောင်လွှားဆန့်ကျင်မှုတို့ဖြင့် တုန်လှုပ်စေရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပသခါပွဲသည် နောက်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးဘေးဒဏ်ဖြစ်ပြီး အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် သခင်ဘုရားဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏ သားဦးအပေါင်းတို့သည် အသေသတ်ခြင်းခံရသည်။ အဘိဘလတစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့တွင် သိုးသငယ်ကိုသတ်ရန်နှင့် တံခါးခုံနှင့် တံခါးတိုင်များပေါ်တွင် သွေးထည့်ရန် အမိန့်ပေးသောအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် နာခံသောဣသရေလလူမျိုးကို နှမြောခဲ့သည်။ (ကျေးဇူးပြုပြီးရည်ညွှန်းပါ 2. မောရှေ ၁၂)။ အခန်းငယ် ၁၁ တွင် သခင်ဘုရား၏ပသခါပွဲဟုခေါ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းပသခါပွဲကို လူအများက မေ့သွားကြသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါပွဲကို ယေရှုသည် လောက၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားရန် ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဘုရားသခင်က သူ့လူများကို သတိပေးနေသည်။ (ယော 1,29) ကြိမ်ဒဏ်များဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီး သူ့နံဘေးကို လှံဖြင့် ထိုးဖောက်ကာ သွေးများထွက်ကျလာပြီးနောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်း ဤအရာအားလုံးကို သည်းခံတော်မူ၏။
ကျွန်တော်တို့ကို ဥပမာတစ်ခုထားခဲ့တယ်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင့်ညစာစားပွဲဟုခေါ်သော သူ၏နောက်ဆုံးပသခါပွဲ၌ နှိမ့်ချမှုစံနမူနာအဖြစ် အချင်းချင်းခြေဆေးရန် တပည့်တော်များအား သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်အနည်းငယ်ကို ပေးသနားတော်မူသည် (1. ကောရိန္သု 11,23စာ-၂၆၊ယော 6,5၃-၅၉ နှင့် ယော ၁3,14စာ-၁၇)။ အဲဂုတ္တုပြည်ရှိ အစ္စရေးလူမျိုးများသည် သိုးသငယ်၏အသွေးကို တံခါးခုံပေါ်နှင့် တံခါးတိုင်များပေါ်တွင် တင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများကို သန့်စင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးအားလုံးကို ဆေးကြောရန် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖြန်းထားသော ယေရှု၏အသွေး၏ ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ အပြစ်များကို သူ၏အသွေးသည် သန့်စင်စေလိမ့်မည် (ဟေဗြဲ 9,14 နှင့် 1. ဂျိုဟန် 1,7) အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်၏ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဆုကျေးဇူးကား ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ ထာဝရအသက်ဖြစ်၏။ သခင့်ညစာစားပွဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2000 ကဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ နာကျင်ပြီး ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောသေခြင်းကို မမေ့မလျော့စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်၏အသေခံခြင်းကို သတိရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနုတ်ဖိုးကိုပေးဆောင်ရန် ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်အဖြစ် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသော ချစ်လှစွာသောသားတော်သည် လူသားတို့အားပေးဆောင်ခဲ့သော အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကျေးဇူးတော်နှင့် မထိုက်တန်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်လှစွာသောသားတော် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသနားရန် သူ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါပွဲဖြစ်သော ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန် တလိုတလား အသေခံခဲ့သည်။ ဟေဗြဲ ၁ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။2,1-2 “ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည်လည်း ငါတို့ပတ်လည်၌ ဤမျှလောက်ကြီးစွာသော သက်သေများရှိနေသောကြောင့်၊ ငါတို့ကို နှိမ့်ချစေသော အရာအားလုံးနှင့် ငါတို့ကို အဆက်မပြတ် ကျော့မိနေသော အပြစ်ကို ဖယ်ထားကာ ငါတို့ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် တိုက်ပွဲတွင် စိတ်ရှည်စွာ ပြေးကြစို့။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသော်လည်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ အရှက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ျာတော်ဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူသော ယုံကြည်ခြင်း၏အစပြုသူနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောသခင်ယေရှုအား။